Salamanca Loft - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSophie
I-Salamanca Loft yiflethi okanye indlu ekwicomplex evulekileyo, ekhanyayo neflethi okanye indlu ekwicomplex eneendwendwe ezine.
Indawo yethu ethe cwaka, yabucala, kwaye isembindini weSalamanca 's dining and entertainment precinct, indawo yethu ezimeleyo nehonjiswe kakuhle inendawo yokupaka ekhuselekileyo esitratweni nayo yonke into onokuyidinga ukuze kube lula kwaye konwabise kangangoko kunokwenzeka.
I-Salamanca Loft yiflethi okanye indlu ekwicomplex entsha, entle, ekwicomplex ekwindawo yokuzonwabisa yaseSalamanca kwaye ingaphantsi kwemizuzu eyi- xa uhamba ngeenyawo ukusuka e-Hobart edumileyo engaselunxwemeni.
Pheka imveliso entsha yaseTasmania, ethengwe kwiimarike ezidumileyo zangoMgqibelo zeSalamanca ezifumaneka ngqo ngaphantsi kweefestile zakho, kwikhitshi lethu elikhulu elinento yonke.
Okanye uphumle ngeglasi yewayini yaseTasmania kwiveranda enelanga ngaphambi kokuya kwisidlo sangokuhlwa kwenye yeevenkile zokutyela zaseHobart ezikumgama okufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex.
Igumbi lokuhlambela elivulekileyo, amagumbi okulala amabini, kunye neendawo ezinkulu zokutyela kunye nendawo yokuphumla zigcwalisa iflethi okanye indlu ekwicomplex uze wenze indawo ye-idillic yokufumanisa ezona zinto zintle ezifumaneka kwiHobart.
I-Salamanca Loft yiflethi okanye indlu ekwicomplex ibe iyafikeleleka ngezitepsi ezintathu.
Ngezantsi kwakho, eyona ndawo iphambili ye-Salamanca igcwele iikhefi, iivenkile zokutyela, kunye neebhari ezinokuxakeka kwaye zinengxolo, kodwa ngenxa yemigangatho emininzi yeofisi phakathi kwakho nesitrato siye sanezikhalazo ezimbalwa kakhulu.
Siyazamkela iintsapho ezinabantwana nabantwana ibe siza kwenza konke okusemandleni ethu ukusingatha naziphi na iimfuno ngokukhethekileyo kwindawo yakho yokuhlala.
Funda izimvo zethu, uze emva koko uze wonwabele ezona ndawo zokuhlala zintle zaseHobart!
4.92 · Izimvo eziyi-348
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi348
I-Salamanca Loft ikwenye yezona ndawo zibalaseleyo eHobart.
Sifumaneka kanye kumbindi weendawo zokutyela nezolonwabo ezidumileyo zaseSalamanca, ngaphantsi kwemizuzu eyi- xa uhamba ngeenyawo ukuya ngaselunxwemeni naselunxwemeni.
Kwimizuzu nje embalwa ungazulazula kwi-Bhetri Point uvuyela izindlu zasemaphandleni neekhefi ezintle, okanye uhambe ngesikhephe usiya e-Mona.
Yonwabela i-cocktail e-Glasshouse kwi-Brooke Street Pier, i-gin e-Sud Polaire, okanye ungcamle i-whisky yehlabathi e-Lark Distillery.
Ekuseni yonwabela isidlo sakusasa kwiKhefi Yokuhlamba Iimpahla, okanye utye kwiimarike ezidumileyo zeSalamanca neFarm Gate.
Iindwendwe ziza kufumanisa ukuba phantse zonke iindawo ezinomtsalane zaseHobart kunye neevenkile zokutyela ezithandwayo, iivenkile zokutyela kunye neebhari zikumgama okufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi nceda uye kwindawo yethu (I-IMEYILE IFIHLIWE)
Umbuki zindwendwe ngu- Sophie
I'm the host at Salamanca Loft in beautiful Salamanca, Hobart.
I live in Hobart with my husband, my two dogs, and my two children.
I work in marketing, events and media/PR and feel so lucky to live in this insanely gorgeous city.
I can't live without good coffee and great food and wine and luckily we have LOADS of them all down here so ask me for a recommendation!
I really want my guests to have a wonderful time when they stay with us so I try to think of all the little details that help make a trip special, and if there's anything else you need or you have any questions I'm always only a phone call away!
I work in marketing, events an…
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into efunekayo kwindawo efanelekileyo yokubaleka eTasmania, nangona kunjalo umamkeli wethu uhlala efowuna kuphela ukuba ufuna nantoni na, okanye ufuna ingcebiso yasekhaya. Iindwendwe zinokuthatha kwaye zilahle izitshixo zazo ngebhokisi enekhowudi yemfihlo okanye utshintshiselwano lwesitshixo sobuqu lunokulungiswa.
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into efunekayo kwindawo efanelekileyo yokubaleka eTasmania, nangona kunjalo umamkeli wethu uhlala efowuna kuphela ukuba ufuna…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hobart